Qaramada Midoobay: 18,000 qof oo rayid Yemeniin ah ayaa lagu dilay duqeymaha xagga cirka ah tan iyo 2015kii - Diblomaasi
Guddi ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii sheegay in ugu yaraan 18,000 oo qof oo rayid Yemeni ah lagu dilay ama lagu dhaawacay duqeymo xagga cirka ah tan iyo markii uu dagaalku sokeeye dalkaas ka qarxay sannadkii 2015 -kii.
Warbixin loo soo bandhigay Golaha Xuquuqul Insaanka, koox khubaro ah oo ay magacowday Q.M ayaa sheegtay in dadka Yemen maalin walba la soo gaarsiiyo ilaa 10 duqeymood oo cirka ah, wadar ahaan in ka badan 23,000 tan iyo bishii Maarso 2015.
Warbixinta oo soo xiganeysa Mashruuca Xogta Yemen ee tirooyinka duqeymaha cirka, ayaa lagu ogaaday in labada dhinac ee dagaalka ay ku xadgudbeen xeerarka caalamiga ah. Mashruucan oo ah hawlgal xog uruurin maxalli ah, ayaa dhammaan duqeymaha cirka u aaneynaya isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo.
Dhanka kale, kooxaha isbahaysiga, mucaaradka Xuutiyiinta, ayaa duqeeyay xaafadaha, xeryaha barakacayaasha, garoon diyaaradeed iyo suuqyo, taasoo keentay dhimashada farada badan, waa sida ay sheegeen khubarada Qaramada Midoobay.
Yemen waxaa ka dhacay dagaalo sokeeye tan iyo 2014 markii Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto ay qabsadeen caasimadda Sanca iyo inta badan waqooyiga dalka, taasoo ku qasabtay dowladda Madaxweyne Cabdi Rabbo Mansuur Haadi inuu u baxsato koonfurta, kadibna Sacuudiga Carabiga.
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo, oo uu Maraykanku taageerey xilligaas, ayaa dagaalka galay bishii Maarso 2015 si uu isugu dayo in madaxweyne Cabdi Rabbo Mansuur Haadi xukunka ku soo celiyo, wuxuuna taageeraddiisii ​​ka tuuray xukuumaddiisii ​​uu caalamku taageeray. In kasta oo uu jiro olole hawo oo aan joogsi lahayn iyo dagaal dhulka ah, dagaalku wuxuu si aad ah ugu xumaaday ismariwaa, sidoo kale wuxuu dhaliyay dhibaatada bani’aadamnimo ee ugu xun adduunka. Mareykanka ayaa tan iyo markaas joojiyay inuu si toos ah ugu lug yeesho iskahorimaadka.
Xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo iyo Xuutiyiinta midkoodna si degdeg ah ugama jawaabin codsiyada faallada warbixinta. Waagii hore, labaduba waxay eedeeyeen kuwa ka soo horjeeda inay mas’uul ka yihiin dhimashada ugu badan ee rayidka.
Khasaaraha dhabta ah ee iskahorimaadka ayaa weli la isweydiinayaa, sababtuna tahay helitaan kooban oo ka jira qaar ka mid ah meelaha fog fog ee laga sameeyay. Bishii Diseembar 2020, hay’adda bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dagaalku sababay in ka badan 200,000 oo dhimasho ah, oo ay ku jiraan in ka badan 100,000 sababaha aan tooska ahayn sida gaajada iyo sababaha laga hortegi karo sababo la xiriira la’aanta adeegyada aasaasiga ah. Goobta Iskahorimaadka hubeysan & Mashruuca Xogta Dhacdada, ama ACLED, oo aruurisa xogta isku dhacyada caalamka, ayaa sheegaysa in dagaalka ay ku dhinteen 144,620 qof intii u dhaxaysay 2015 ilaa hadda.
Warbixinta Qaramada Midoobey ayaa tilmaamtay dhanka duqeymaha cirka oo ay geysteen isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo, iyada oo aan si toos ah loogu eedeyn.
Xuutiyiintu ma laha ciidan cirka oo shaqeynaya, laakiin waxay bilaabeen weerarro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qarxa oo sababay sababaha dadka rayidka ah. Waxay ku tiirsan yihiin gantaalaha dhulka laga tuuro iyo gantaallada, inta badan.
Kooxdu waxay ku dhaliishay isbahaysiga inay ku guuldareysteen inay la wadaagaan faahfaahinta sida ay u go’aamiyeen waxa ay noqon doonaan bartilmaameedyada weerarada qaarkood ee sababay dhimashada carruurta iyo haweenka. Waxa kale oo ay sheegtay in hay’addii baaritaanka ee isbahaysiga ay heshay “khalad farsamo” in ay mas’uul ka tahay kiisaska dhimashada rayidka iyada oo aan wax isbeddel ah oo dambe lagu samayn hawlgallada.
Labada dhinacba waxaa la ogaaday inay bartilmaameed ka dhigteen xarumo caafimaad oo muhiim ah iyo kaabayaasha silsiladda sahayda cuntada.
Dhacdooyinka duqeynta ee la baaray waxaa ka mid ahaa weerar bishii Diseember 2020 ka dhacay gagida diyaaradaha caalamiga ah ee Cadan kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof daqiiqado kadib markii ay timid diyaarad sidday xubno cusub oo ka tirsan dowladda caalamku aqoonsan yahay. Khubarada Qaramada Midoobey ayaa hore u sheegay in weerarka si cadaalad ah loogu tiriyo gantaallada ay Xuutiyiintu soo rideen.
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sii wadista iibinta hubka labada dhinac ee dagaalka uu sii xumeeyay dagaalka. Waxay sheegtay in waddamada sii waday wareejinta hubka ee Yemen ay yihiin Kanada, Faransiiska, Iiraan, Ingiriiska iyo Mareykanka.
Kulanka Midowga Yurub iyo Sucuudiga ayaa ujeedadiisu tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada – maxaad ka fahantay?
Israa’iil ayaa masaajidka Ibrahimi ka xirtay cibaadeystayaasha reer Falastiin laakiin waxay u oggolaatay inay soo galaan oo kali